Ndị na-emepụta ọkọlọtọ akpa azụ - China Banner Banner Suppliers & Factory
Akpa akpa Deluxe
Ihe Oxford na-eme ka akpa azu sie ike ma na-adịgide adịgide ruo ogologo oge.
Ogwe azụ 3D-ụfụfụ dị arọ nke nwere ọwa ikuku na-eru maka ibu dị ntụsara ahụ.
Eriri ubu gbadoro anya, eriri na-edozi maka nkasi obi.
Akpa akụkụ & oghere zippped n'ime maka nchekwa wee hapụ gị aka efu.
Na-akwado SFH pole na X pole wdg, ụdị ọkọlọtọ ọdabara ruo 14 aghụghọ.
Akpa akpa mmefu ego
Akpa akụkụ & oghere ntupu n'èzí maka nchekwa wee hapụ gị aka efu.
Na-akwado naanị mkpanaka SFH, ụdị ọkọlọtọ ọdabara ruru ihe ngosi 5.
Akpa akpa bụ isi
Emere ya na HDPE site na nhazi ịkpụzi ihe.
Akpa ije ije dị ọnụ ahịa nwere nhazi ergonomically.
Na eriri na-agbanwe agbanwe na enweghị akpa.
Na-akwado ogwe osisi SFH na ogwe X wdg.
Ụdị ọkọlọtọ ọdabara dị ka akpa azu nke deluxe, mana ọnụ ahịa adịghị ọnụ.
Ọkọlọtọ akpa azụ nwere X, nke a makwaara dị ka ọkọlọtọ Mochila ma ọ bụ ọkọlọtọ akpa ego mmadụ, bụ ngwa mgbasa ozi dị elu, mkpanaka na nke dị fechaa maka ụdị azụmaahịa ọ bụla. Otu n'ime atụmatụ ọkọlọtọ akpaazụ anyị kacha ewu ewu
Ọkọlọtọ akpa azụ anyị ọhụrụ & akara, ihe ọhụrụ eji ejikọta ọkọlọtọ na akwụkwọ mmado ọnụ, ị nwere ike itinye ọkọlọtọ na azụ wee mado akwụkwọ mmado n'elu ala dị larịị nke azụ azụ, nke ahụ pụtara itinye uche abụọ na ozi gị. Ọ bụ ụzọ dị mma iji kwalite ika gị ma ọ bụ ngwaahịa gị na-aga n'ihu maka mmemme ma ọ bụ nkwalite ika.
Mgbasa ozi akpa azụ nwere ọdịdị Deluxe
Ije ije azu paaki na M-ụdị omenala e biri ebi eserese maka ahịa na mgbasa ozi, makwaara dị ka ije azu paaki urukurubụba, otu n'ime ndị kasị ewu ewu aghụghọ nke anyị na-eje ije flags na ndị dị otú ahụ dị mfe ịtọlite, nnukwu ozi mpaghara, mma urukurubụ udi wdg.
Akpa Deluxe - W
Ije ije na-eje ije na W-ụdị eserese eserese e biri ebi maka ịre ahịa na mgbasa ozi, nke a makwaara dị ka ije ije azu paaki Wing, nwere njirimara dị mfe ịtọlite ​​​​, mpaghara ozi buru ibu, ụdị Wing mara mma wdg.
Akpa Deluxe - nche anwụ
Ọkọlọtọ akpa azu nke mbụ nke ụwa nwere nche anwụ a na-emegharị emegharị maka mgbasa ozi ije
Akpa azu paaki na-ejide gị nche anwụ, ọ na-ahapụ aka gị ime ihe omume ahụ ma na-echebe gị pụọ na ụzarị UV, okpomọkụ na mmiri ozuzo n'oge ọ bụla. Ihe mkpuchi nke nche anwụ na-agbanwe agbanwe ma nwee ike ịhazi ya na mbipụta ọ bụla nke eserese. nche anwụ dị mfe imeghe na mpịaji, juru n'ọnụ n'ime akpa akpa mgbe ọ na-adịghị eji; Enwere ike igosipụta n'ala dị ka ọkọlọtọ X iji gosi ozi gị. Nche anwụ azụ azụ bụ ezigbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ mgbasa ozi mkpanaka n'èzí na mmemme na Summer.
Nkwalite na ndọtị na usoro ọkọlọtọ akpa azụ anyị, ma e jiri ya tụnyere ọkọlọtọ rectangle azụ azụ, ọkọlọtọ abụọ na-enye ohere maka mmetụta anya kachasị na mpaghara ika buru ibu.
Enwere ike idozi ogwe ogwe aka dị elu ka ọ gosipụta na ogo 45 maka nlele ọtụtụ ma ọ bụ ogo 180 dị ka otu nnukwu ọkọlọtọ.
Ọkọlọtọ azu paaki anyị bụ ngwa dị fechaa, dịkwa ọnụ ahịa maka ịkwalite na mgbasa ozi ika ma ọ bụ ọrụ gị na-aga n'ihu na mmemme ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí.
Akpa Deluxe - O
O-Shape Wearable Advertising Akpa nke na-enye gị ohere ịmepụta na ibipụta ozi bụ ngwá ọrụ dị mfe, dị ọnụ ahịa iji kwalite ma kpọsaa akara gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị mgbe ị na-eme njem n'ime ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí na n'ime nnukwu ìgwè mmadụ.
Bọọlụ azu azu nke nwere usoro mpịachi lantern, dị mfe ịtọlite, ịkwakọ na obere nha, dị fechaa na obere ibu, bụ ngwa pụrụ iche na nke dị oke mma iji gosipụta akara ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ozi nkwado ọhụrụ gị, dị mma maka mmemme, nkwalite na ihe ngosi.